Ukuphupha ngobusuku Discover ➡ Discover online ▷ ➡️
Kubantu abaninzi, ubusuku buthetha ukuphumla, ukuphumla, ukulala, kunye nokuthatha umhlala phantsi. Ixesha lokuthi cwaka nokuzalwa ngokutsha.
Kodwa umfanekiso wephupha "lobusuku" ukwasondele kakhulu kwimvakalelo yomntu okhohlakeleyo, ongaqondakaliyo, kwaye ngamanye amaxesha oyingozi. Ubusuku buvela njani ephupheni lakho? Ngaba ubumnyama buzele ziinkwenkwezi okanye buzaliswe lusizi kwaye bugutyungelwe ngamafu? Abantu abaninzi abaphuphayo bazibona bebukele isibhakabhaka ebusuku kusetyenziswa iteleskopu yokujonga izinto, apho banokufumana khona iiplanethi ezahlukeneyo, ezinje ngeJupiter okanye iPluto.
Khumbula ukutolika kangangoko kunokwenzeka zonke iisimboli zamaphupha ezavela ngokunxulumene nomfanekiso wephupha "wasebusuku" ngelixa ulele. Oku kunokubandakanya amalulwane, isikhova esibonileyo okanye esiviweyo, la luna, iinkwenkwezi, ukuchama okanye ubumnyama nje. Nabani na oleleyo ngobusuku abaphuphileyo utolika iphupha ngokwahlukileyo kunomntu owafumana umphango kubusuku bephupha.
1 Isimboli yephupha «ebusuku» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Umqondiso wephupha «ebusuku» - ukutolikwa kwengqondo
3 Isimboli yephupha «ebusuku» - ukutolika kokomoya
Isimboli yephupha «ebusuku» - ukutolikwa ngokubanzi
Nangona sichitha malunga nesithathu sobomi bethu silele, amaphupha anomfanekiso wephupha "ebusuku" okanye ezinzulwini zobusuku kunqabile. Kubonakala kunomdla ngakumbi ukulandela umbuzo wokuba kutheni ubuthongo buqhubeka ebumnyameni bobusuku hayi emini emaqanda. Nokuba kungabonakala kukhwankqisa ekuqaleni, akusoloko kunokwenzeka ukuba utolike amaphupha ngendlela engeyiyo.
Ukuba ufumana ubumnyama bobusuku obucace njengeenkwenkwezi, mhlawumbi obukhanyiselwe kukukhanya kwenyanga, isixelela ukuba sisendleleni elungileyo, eyethu. injongo sinombono ocacileyo kwaye ke sifumane ubungqina bento enokubonakala ingakhuselekanga xa siphaphile.
Nangona kunjalo, ukuba singena kubusuku obumnyama-mnyama, iphupha lisibonisa ukuba siziva singakhuselekanga. Mhlawumbi sijamelene nokungaqiniseki uphuhliso ebomini bethu, utshintsho olungenako ukuvavanywa okanye ukusibona silubona peligro kucacisiwe. Apha umfuziselo wephupha "ubusuku" usibonisa ngokucacileyo ukuba kufuneka sijonge ngakumbi kwaye mhlawumbi sikhanyise ukukhanya okungakumbi kwimiba efihliweyo kubumnyama bobusuku.
Ukutolikwa okungaphezulu kwesimboli yephupha "ebusuku":
Ukuzibona: ungene kwimeko enxungupheleyo
Ngena ukukhanya kwemini: uphinde ufumane oko ulahlekileyo
Ukuhamba ebumnyameni: usizi, ukudana, ukulahleka kwemali
kukuhamba ebumnyameni: isoyikiso asikaziwa
jonga inyanga ecwengileyo esibhakabhakeni: ixesha lotshintsho luyasa
Jonga ukuvutha kooqongqothwane baseSan Juan- uyakufumana umyalezo wothando kungekudala.
Amava obusuku obushumi elinambini-umba wekamva lakho uya kuhlala kuwe.
Umqondiso wephupha «ebusuku» - ukutolikwa kwengqondo
Ukusuka kwindawo yokujonga kwengqondo, uphawu lwephupha "ubusuku" luhlala lubonisa unxibelelwano ne Akukho zingqondweni. Yintoni esikhathazayo kubumnyama be-subconscious yethu? Ukujongwa kufutshane kunokubonisa uloyiko kunye namathandabuzo apha. Apha ukutolikwa kwephupha kusibonisa ukuba mhlawumbi alikafiki ixesha lokuphumeza izinto kwaye umfanekiso wephupha "ebusuku" ufuna ukusibonisa ukuba silinde kwaye sizise ukukhanya ngakumbi ebumnyameni.
Iminqweno eyimfihlo nayo ifihliwe ebusuku. Apho singazivumeli ukuba sithande kwaye sicinezele? Iidayes Umphefumlo wethu?
Icandelo elimnyama lesimboli ye-yin-yang linokubonisa ubusuku. Nangona kunjalo, ukuba le yimeko ephupheni, amaxesha adinisayo ngokubanzi alele phambili el mundo yomlindo.
Isimboli yephupha «ebusuku» - ukutolika kokomoya
Umfanekiso wephupha lasebusuku ufuzisela ukutolikwa kwephupha lokomoya ubumnyama ngaphambi kokuvuka. Ngaphandle kobumnyama bekungayi kubakho kukhanya, enye iimeko enye. Uphawu "lwephupha" luphawu olubonisa TodQuién IWiedergeburt kwaye ke yandulela ubomi kwakhona.